ပြည်သူ့အချစ်တော်ဖွေးဖွေး သီချင်းပြန်ဆိုတော့မှာလား....... - Myanmarload
လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ် က 15:57 September 09, 2016
မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်လောက မင်းသမီးလေး ဖွေးဖွေးဟာ သူ့နေရာနှင့်သူ ရပ်တည်နေပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိနေတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ဆိုလဲမမှားပါဘူး။ အနုပညာလောက ကို အဆိုတော်အနေနဲ့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးမှ မင်းသမီးအဖြစ်နာမည်ကျော်ကြားလာတဲ့ ဖွေးဖွေးကိုဂီတဘက်ကိုခြေလှမ်းလှမ်းတော့မှာလား......
ဖွေးဖွေး ရဲ့ fan ပေ့ချ်မှာ သူမ နှင့်သူ့မောင်လေး သီချင်း ဆိုနေတဲ့ ဗီဒီယို လေးတွေ တင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဂီတ နှင့် အနုပညာခြေလှမ်းကို စတင်ခဲ့တာကြောင့် ဖွေးဖွေး ဟာ သီချင်းဆိုတဲ့ နေရာမှာလဲ အထိုက်အလျှောက်တော့ နားထောင်လို့ကောင်းပ့တယ်။
သူမ ပရိသတ်တွေ လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ ဂစ်တာလေးနဲ့ သီချင်းတွေ ဆိုပြတာကြောင့်လဲ သူမ ပရိသတ်တွေက ဖွေးဖွေးဗီဒီယို တစ်ခုတင်တိုင်း သီချင်းဆိုတာကောင်းတယ်လို့ပြောကြပြီး အမြဲ ချီးကျူးကြပါတယ်။
သူမရဲ့ IG အကောင့်မှာ တက်လာတဲ့ ဓာတ်ပုံ နှစ်ပုံ ဟာ သူမဂီတ ဘက်ကို ခြေလှမ်းလှမ်းတော့ မယ်ဆိုတာကို အရိတ်အမွတ်ပေးသလိုတောင်ဖြစ်နေပါတော့ တယ်။
ပုံမှာ တွေ့ရတဲ့ အတိုင်း အသံသွင်းစတူဒီယိုမှာ အသံသွားသွင်းတဲ့ ဖွေးဖွေးဟာ သီချင်းခွေ အတွက် သွင်းတာလား? ဒါမှမဟုတ် သူမသရုပ်ဆောင်တဲ့ နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အသံပြန်လိုအပ်လို့လာသွင်းတာလားဆိုတာ ပရိသတ်တွေကလဲ စဉ်းစားရခတ်နေပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးကရော ဖွေးဖွေးကို သီချင်းပြန်ဆိုစေချင်လား? မဆိုစေချင်ဘူးလား?